Nhau - Nzira yekuziva uye kusarudza zvakare dispersible polymer poda?
Redispersible polymer hupfuipfu inonyungudika nemvura inodispersible poda, inonyanyozivikanwa ndeyeethylene-vinyl acetate copolymer, uye inoshandisa polyvinyl doro sekudzivirira colloid.Naizvozvo,redispersible polymer podainonyanya kufarirwa mumusika weindasitiri yekuvaka.Asi mhedzisiro yekuvaka yeredispersible polymer podahaigutsi nekuda kwesarudzo isina kufanira.Saka zvakakosha zvikuru kusarudza zvakanakaredispersible polymer poda, nzira yekuziva uye kusarudza iyoredispersible polymer poda?
Nzira yekuzivaredispersible polymer poda
1. Sanganisaredispersible polymer podanemvura muchiyero che1: 5, fambisa zvakafanana uye rega imire kwemaminitsi mashanu, wozocherechedza sediment pazasi.Kazhinji, iyo shoma sediment, zviri nani kunaka kweRDP.
2. Sanganisaredispersible polymer podanemvura muchiyero che1: 2, funganisa zvakaenzana, rega kumira kwemaminitsi maviri, uye wozovhenganisa zvakaenzana, dururira mhinduro pagirazi rakachena, isa girazi mumumvuri une mhepo, mushure mekuoma zvakakwana, svuura coating pa. girazi uye tarisa iyo polymer firimu.Kunyanya kujeka kunowedzera, zviri nani kunaka kweredispersible polymer podandizvo.Dhonza firimu zvine mwero.Izvo zviri nani iyo elasticity, zviri nani kunaka.Cheka firimu kuita zvidimbu.Yakanga yakanyoroveswa mumvura, uye yakacherechedzwa mushure mezuva 1, iyo isinganyanyi kunyungudika, zviri nani kunaka.
3. Tora huwandu hwakakodzera hwepolymer hupfu hwekuyera, uise mumudziyo wesimbi mushure mekuyera, kupisa kusvika ku500 ℃, upise pakupisa kwe500 ℃, uye wozoyera mushure mekutonhodzwa.Kureruka kurema, kunowedzera kunaka.
4. Glue test nekatoni bhodhi kana veneer.Tora zvimedu zvidiki zviviri zvekatoni bhodhi kana bhodhi rakatetepa rehukuru hwakaenzana, uye isa glue kune chinongedzo chemuenzaniso.Mushure memaminitsi makumi matatu ekumanikidza chinhu, chibudise kunze kuti chiongororwe.Kana inogona kusungirirwa zvakasimba uye iyo interface iri 100% yakaparadzwa, yakanaka kunaka kweRDP.Kana iyo interface inogona kungoparadzwa zvishoma, zvinoreva kuti simba rekunamatira reRDPhaina kunyanya kunaka uye mhando yacho haina kukodzera.Kana iyo interface iri yakasimba uye isina kukuvadzwa, zvinoreva kuti yakaderera uye yekunyepedzera.
Nzira yekusarudzaredispersible polymer poda
1. Thegirazi shanduko tembiricha (TG) of redispersible polymer poda.Girazi shanduko yekushisa chiratidzo chakakosha chechimiro chemuviri weRDP.Kune chimwe chigadzirwa, sarudzo inonzwisisika yegirazi shanduko tembiricha (TG)wepaRDPinobatsira kuwedzera kushanduka kwechigadzirwa uye kudzivirira matambudziko akadai sekuputika.
3. Minimum film forming tembiricha (MFFT).Mushureredispersible polymer podainosanganiswa nemvura uye zvakare emulsified, ine zvinhu zvakafanana kune emulsion yepakutanga, ndiko kuti, firimu ichaumbwa mushure mokunge mvura ichibuda.Iyo firimu ine yakakwirira kuchinjika uye yakanakisa kunamatira kune akasiyana substrates.
Zviri pamusoro ndiyo nzira yekuziva nayoredispersible polymer podauye kusarudzaredispersible polymer poda.Vanhu vari muindasitiri yekuvaka vanoziva RDP seKuvaka Kwekuvaka Makemikarikukosha.Hunhu hwepolymer poda hunoenderana zvakananga nemhando uye kufambira mberi kwekuvaka.Zvakakosha kusarudza zvakakodzeraredispersible polymer poda.
Nguva yekutumira: Feb-10-2022